Ụlọọrụ Culture - Civen Metal Material (Shanghai) Co., Ltd.
Dịkwuo arụmọrụ na njikwa, kwalite mmepe na ihe ọhụrụ.
Jikọta akụ, wusie ọrụ ike, ma melite asọmpi asọmpi nke ụlọ ọrụ ahụ.
Site na ịdị mma siri ike ịkpụzi aha na ika; site na usoro amụma sayensị na nke dị irè iji kwalite usoro na ịhazi njikwa; site n'echiche na -emegharị ahụ iji mebie echiche ochie, jiri echiche ọhụrụ na ụzọ nke ihe okike na -aga n'ihu iji kwalite mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ; site na egwuregwu zuru oke nke akụ nke ụlọ ọrụ ahụ na iji akụ nke ọha na -arụ ọrụ nke ọma iji nweta atụmatụ ụlọ ọrụ na ebumnuche; site na afọ ojuju ahịa dị ka na -ejere onwe anyị aka kwalite otu imekọ ihe ọnụ, si otú akpụ anyị isi competitiveness.
A raara azụmaahịa anyị iji gboo mkpa ndị ahịa anyị maka ihe alloy metal na ngwaahịa ndị yiri ya, raara nye ekele isi obodo, ma raara onwe ya nye n'ịmepụta onye na-ebubata ihe eji eme ọla.
Site na echiche ọhụrụ, anyị na -eche ahịa a na -ejighị n'aka amụma ma na -akwalite mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ site n'echiche dị omimi iji mebie echiche ochie na okike na -aga n'ihu na echiche na ụzọ ọhụrụ; site n'inye ego nke ụlọ ọrụ ahụ nke ọma na iji ihe ndị na -elekọta mmadụ eme ihe nke ọma iji ruo atụmatụ na ebumnuche ụlọ ọrụ ahụ; site na ndị ahịa na -eju afọ bụ imeju echiche nke aka anyị iji kwalite mmekorita otu, si otu a na -eme asọmpi asọmpi anyị. Anyị ga -eme ike anyị niile ijere ọha mmadụ ozi na ịkekọrịta ihe ndị rụzuru.
Anyị na -ekwurịta okwu ma na -arụkọ ọrụ na mmụọ nke ịnụ ọkụ n'obi, ịkwụwa aka ọtọ na ntụkwasị obi n'ihe anyị na -eme; anyị na -achị ntụkwasị obi na obi ike imepụta, ọsụ ụzọ na imepụta ihe ọhụrụ; anyị na -abanye n'ọdịniihu site na nsụhọ na mmụọ nke ịgbalịsi ike, ịtụ ahịa na enweghị atụ.
Site n'echiche nke "ọ nweghị ike ime, naanị enweghị ike iche echiche", anyị na -agbagha ụnyaahụ mgbe niile wee nweta echi iji gosipụta uru ndụ anyị bara; site n'echiche nke "ọ dịghị mma, naanị ka mma", anyị na -agbasi mbọ ike maka ọrụ anyị na ọrụ anyị ka anyị wee nwee ike anyị enweghị njedebe.
Ngwa ngwa, dị mkpụmkpụ, kwụ ọtọ ma dịkwa irè.
Anyị na -eji ọsọ kachasị ọsọ, oge dị mkpụmkpụ, ụzọ kwụ ọtọ ma dị irè iji mee "Enyela ọrụ taa maka echi" ma melite ike anyị.
Dabere na omume ọma, anyị ga -egosipụta uru anyị bara na ihe ọhụrụ na arụmọrụ.
Anyị na -elekwasị anya n'ịzụlite ma na -akwalite ndị ọrụ anyị na obi dị mkpa, nwee mmasị na mmụọ otu; na ọrụ nke ịchekwa ume, melite ogo na ịkwalite asọmpi nke ụlọ ọrụ; na ebumnuche nke ịrụcha ọrụ ike.